Amanqaku kaTaylor Chrisman kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UTaylor Chrisman
UTaylor Chrisman yinxalenye yeqela lokuThengisa uMxholo e Intengiso yedijithali yamandla. Unomdla wokubalisa amabali e-brand ngokusebenzisa umxholo wokunxibelelana kunye nokuzibandakanya kunye namaqonga eendaba ezentlalo.
UTaylor uphumelele kwiYunivesithi yaseSan Diego efunda ukuThengisa.
Uyenza njani intengiso ye-Snapchat
NgoMvulo, Septemba 26, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UTaylor Chrisman
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, i-Snapchat ikhule ngokulandelayo ukuya ngaphezulu kwesigidi se-100 kwihlabathi liphela ngaphezulu kweebhiliyoni ezili-10 zevidiyo ezibukwayo ngosuku. Ngomlinganiselo omkhulu kangaka wabalandeli kule app yonke imihla, kuyamangalisa ukuba iinkampani kunye nabathengisi bayathontelana ukuya eStapchat ukuya kubhengeza kwiimarike zabo ekujoliswe kuzo. I-Millennials ngoku imele i-70% yabo bonke abasebenzisi kwi-Snapchat Ngabathengisi abachitha ngaphezulu kwe-500% ngaphezulu kwi-millennials kunabo bonke abanye bedityanisiwe